နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: ကိုယ်ပြန်လာပြီ.....:)
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:25 AM
Sweety Snow December 16, 2012 at 8:01 AM
တော်သေးတာပေါ့ ပြန်ဖွင့်လို့ရတာ..။ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ကဗျာတွေစာတွေ အများကြီး ဆက်လက်ဖန်တီးနိုင်ပါစေ မိုးနတ်ရေ. အမြဲအားပေးနေတယ်နော် <3 <3
ရတုသစ် December 16, 2012 at 11:43 AM
ချစ်စံအိမ် December 16, 2012 at 3:21 PM
တို့ မောင်နှမတွေစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ လျှောက်လှမ်းကြတာပေါ့ကွယ်...
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) December 16, 2012 at 8:07 PM
စိတ်သစ်လူသစ်လေးကို ကြိုဆိုပါတယ် မိုးနတ်ရယ် .. Let By Gone And Be By Gone ပေါ့ ..
ပြီးခဲ့တာတွေလည်း ပြီါ်ပါစေတော့ .. ကဗျာလေးတွေ ဆက်ရေးနော်
ရိုးမြေကျ December 16, 2012 at 9:53 PM
ညလေးမိုးနတ် အခုထိ အစ်မကို မအပ်သေးဘူးနော်။ အပျော်တွေလွန်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်စညလေး။
ချင်းမလေး December 16, 2012 at 10:52 PM
အမ မိုးနတ်ကိုစာပို့ သေးတယ်.. ပြန်စာမလာတော့လို့ ..ဘာမှမတတ်
နိုင်တော့တာ... ဒီလိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ ကောင်းသွားတာပေါ့..။
ကဗျာတွေအများကြီးရေးနော်... လာအားပေးမယ်.. :D
Thu December 16, 2012 at 11:34 PM
ဆူးသစ် December 17, 2012 at 12:29 AM
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် December 17, 2012 at 5:29 AM
Candy December 17, 2012 at 6:12 AM
မိုးနတ်ရဲ့ လတ်တလောလေး ဖတ်သွားတယ်။ ဆွိဒီဇင်ဘာပါ မိုးနတ်ရေ :D
mstint December 17, 2012 at 8:30 PM
Welcome back မိုးနတ်ရေ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာနဲ့ ကြိုဆိုလျှက်ပါနော်။
ညီလင်းနိူင် December 18, 2012 at 9:32 AM
ထပ်တူ ဝမ်းသာမိပါတယ် ။
အဆက်အသွယ်မရှိလို့ ဘယ်လို ကူညီရမှန်း မသိတာကို
စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် ။
အခုလို မြတ်နိူး တန်ဖိုးထားတဲ့ ဘလော့လေး
ပြန်ရသွားတာကို ညီမလေးနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းသာမိပါရဲ့ ။
roseayemaung December 18, 2012 at 3:54 PM
kokoseinygn December 18, 2012 at 9:35 PM
မိုးသူ(တောင်ကြီး) December 19, 2012 at 4:04 AM
မိုးနတ်ရေ ဘလော့လေးပြန်ရတယ်ဆိုတော့ မိုးသူဝမ်းသာပါတယ်
မိုးနတ်ကြယ်စင် December 19, 2012 at 4:45 AM
ဟုတ်တယ် ..မိုးရေ..အဲဒိတုန်းက ပြန်မရသေးဘူးလေ....အဲဒါကြောင့်ပါ..
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) December 19, 2012 at 11:42 AM
ရွှေသဲ..ကြေကွဲ.. မျက်ရည်ဝဲလည်လည်.. ရွှေသဲ..ကြေကွဲ မျက်ရည်ဝဲလည်လည်..
အော်.. အလွမ်းမိုနတ်.. ပန်းမိုးနတ်ရယ်... (ထွန်းင်္သာတ ဟင်းရင်)။
ရင်တွင်း ခံစားချက်တွေ ဆက်လက် ညှစ်ထုတ်နိုင်ပါစေကြောင်း။း)
ချင်းမလေး December 19, 2012 at 9:01 PM
Cing Kiim ကိုရှာကြည့်လိုက်နော်.. တကယ်လို့ မတွေ့ ရင် ရိုးမြေကျ ရဲ့ သယ်ရင်းထဲမှာ ပါတယ်..
အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင် အမ ကိုမေးလ်ပို့ လိုက်နော်..ညလေးရဲ့ ဖဘ နာမည်လေးပါကိုပေါ့..:)
မိုးငွေ့........ December 20, 2012 at 3:24 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် December 20, 2012 at 7:41 AM
စိတ်ကလဲ ပုပ်ထှာ လွန်ပါရောဟယ်....
အဲဒါကြောင့် ဒီလူကြီး ခုထိမစွံတာဖြစ်မယ်.....:)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 20, 2012 at 8:14 AM
ဘလော့က အိန်ဂျယ်ရဲ့ ဒုတိယချစ်သူ ဆိုတော့ မရှိလို့ မဖြစ်တဲ့
အထဲမှာပါတယ်... :):) မိုးနတ်လည်း အဲ့လိုပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ..:P
အိပ်မက်ကောင်းကင် December 23, 2012 at 2:23 AM
တော်သေးတာပေါ့ ပြန်ဖွင့်လို့ရလို့ မဟုတ်ရင် မမမိုးနတ်ရေးတဲ့ကဗျာကောင်းလေးကိုလွမ်းနေရဦးမှာ
ကဗျာ အသစ်လေးကိုလည်းစောင့်မျှော်နေမယ်နော် မမမိုးနတ်ရေ
witch83 December 25, 2012 at 6:36 PM
Sweet December ပါ sis... အရွှန်းဖောက်ပြီးရေးထားတာလေး ဖတ်လို့ကောင်းပါ၏။ အချစ်ရေးလည်း အဆင်ပြေပါစေ။ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း ချနိုင်ပါစေ။ :)
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် December 25, 2012 at 7:33 PM
ပြန်ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ။
စံပယ်ချို December 26, 2012 at 2:42 AM
ကြည်ဖြူခင်ခင် December 26, 2012 at 9:31 AM
ဒီတစ်လော ဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့တော်တော်အလုပ်များသွားတာရယ်.. ကျန်းမာရေးရယ်ကြောင့်.. မတက်ဖြစ်တာပါ.. သတိရတယ်ဆိုလို့ ကြည်နူးဝမ်းသာနေမိသေးတယ်.. မိုးနတ်ရေ.. နောက်ဆို မပျောက်အောင်တော့ ဂရုစိုက်ပါမယ်.. ပိုစ့်လေးကတော့ ဖတ်လို့ကောင်းပါ့ရှင်.. :)